12 Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 12 Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu
Qeqesha ukuhamba iBritane, Train Travel Czech Republic, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Zininzi izixeko ezimangalisayo zokundwendwela eYurophu. Zonke izixeko nezitrato zinobuntu bazo nomtsalane. Ukuqaqamba, igcwele iivenkile ezinkulu, boutiques, Ubugcisa basesitratweni, neegalari zobugcisa, kunye ne-eco-friendly, ukuba khange uye kwezi 12 iindawo ezipholileyo eYurophu, Nazi izizathu ezimbalwa zokucofa uluhlu lwakho lwamabhakethi.
1. Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu: Neukolln, Berlin
Kude neyona iphambili utsalo lwezotyelelo e Berlin, Indawo yaseNeukolln liziko lodwa. Indawo epholileyo ngumxube phakathi kwendala nentsha, iinkcubeko, dolophu, kunye neendawo zokuzonwabisa eziluhlaza.
IKababs, zobuciko, Imivalo yophahla ecaleni kweepaki eziluhlaza zenza indawo yaseNeukolln yenye yezona zipholileyo eYurophu. Emva kosuku olukhulu ngaphandle kweTempelhofer Feld enkulu, okanye iBritzer Garden ungaqhubeka uye kwilali entle yaseRichardplatz okanye ipaki yemoto yaseKlunkeranich ejika ibha eluphahleni.
2. Ngaphezulu, Prague
Iipaki zeGreen, igadi zebhiya ezinemibono yemilambo, wangoku imyuziyam yobugcisa zimbalwa ze ubuncwane obufihliweyo kwindawo ebanda kakhulu yasePrague yaseHolesovice. I-Holesovice likhaya labazobi baseCzech kunye neentsapho ezincinci, ukuchitha ixesha labo lokuphumla eLetna Park kunye nokutya kwii-bistros ezininzi ezijikeleze.
Indawo ebefudula inemizi-mveliso ePrague iguqukile yanamhlanje yaba yindawo yoyilo lwabayili kunye nengqondo yoyilo. ke, Akumangalisi ukuba enye yezona ndawo zipholileyo zaseYurophu zineevenkile zekhefi, uyilo lweevenkile, kunye namaziko obugcisa.
3. Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu: Ostiense, eRoma
I-Ostiense ayisiyondawo iqhelekileyo yase-Italiya, kodwa yile nto kanye ebeka kwifayile ye- 10 iindawo ezipholileyo eYurophu. A umzi-mveliso wangaphambili uguqulwe waba yimyuziyam yobugcisa, ubugcisa basesitratweni endaweni yemithombo, cafes ezithandwayo, yaye 1 amangcwaba angengawo amaKatolika apho iimbongi zothando uKeats noShelley bafumana indawo yabo yokulala ngonaphakade Ostiense ayifani nenye.
Indawo eyayingwevu kwikomkhulu lase-Italiya yaguquka kancinci kancinci yaya kwindawo enemibala eqaqambileyo kunye nobuchule bokuyila. Ngaphezu, Apha ungandwendwela iPiramidi engaqhelekanga kaCaius Cestius kwaye uyithande imidwebo yayo, kwindlela yakho yokutya i-Eataly ngokutya kwase-Itali. Ukuba unqwenela ukuhlala njengendawo yasekhaya, Indawo yokuhlala eOstiense ethandwayo ibiza ixabiso eliphantsi kunakwizithili ezixineneyo zaseRoma.
4. UMzantsi Pigalle Ubumelwane eParis
Ukuhambahamba phantsi kweSoPi, ukuya eRue des Martyrs, ikhaya ukuya ngaphaya 200 cafes, chocolatiers, nemivalo, ISouth Pigalle yindawo ekuyo eParis. Ukongeza kwi-South Pigalle njengezulu leefoodies, ummandla opholileyo kulapho unokufumana khona iimyuziyam ezimangalisayo kunye nobugcisa. Enye yeemyuziyam ezizodwa yimyuziyam yoBomi beRoma. KwiMusee de La Vie Romantique ungalwandisa ulwazi lwakho malunga nexesha lokuthandana kwimbali yaseFrance.
Ikhefu lokuphila okuhle, ungaya kwinkundla yebhasikithi enemibala ye-Pigalle. Inkundla yebhasikithi yePigalle ihlaziyiwe, yenzelwe ngemibala eqaqambileyo, kumdlalo obalaseleyo we-basketball. IParis intle indawo yeholide kwaye enye yezona Iindawo ezimnandi zeholide kunye neenkundla ezinkulu zebhasikithi eYurophu.
5. Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu: Arbat, eMoscow
Indawo emibalabala nenomdla yaseArbat inomoya ophefumlayo kwiziko ledolophu laseMoscow eligcweleyo. Uya kufumana iArbat egcwele umtsalane, ngezakhiwo ezimibalabala, cafes, nobugcisa basesitratweni. Njengoko uhambahamba kwiArbat, uya kufumanisa umphefumlo wesixeko esineenkcubeko. Isitalato esidumileyo i-Old Arbat sikwimbali yeArbat Quarter eMoscow igcine ukubaluleka kwayo njengeziko labarhwebi, ukusukela kwinkulungwane ye-15.
Nowadays, Indawo yaseArbat igcwele ii-boutique ze-chic, iivenkile zezikhumbuzo, ubugcisa, kunye nobutyebi obuninzi. Ukwengeza, ngelixa lo mmandla ukhenketho kakhulu, uya kuyifumana ibuyiselwe umva, kwaye intle. Ukonwabela eyona Arbat, cofa phantsi iintsuku ezimbalwa kuhambo lwakho lwaseMoscow, kungcono. Le ndlela, ungaphonononga eyona iMoscow kunye nobuhle bayo ezona ndawo zimangalisayo zokundwendwela iRussia.
6. 7KwiSithili seBudapest
Umncinci kwaye uyonwabisa, ISithili se-7 eBudapest yindawo emangalisa abahambi. Imivalo emikhulu, amagumbi okubaleka angcono eBudapest, imarike yangokuhlwa, kunye neziganeko zenkcubeko, lo mmelwane usoloko ubhuza, ngendlela elungileyo. Lo mmandla upholileyo ikota yamaYuda eBudapest, ungandwendwela nendlu yesikhungu enkulu, uphawu lomhlaba ngokwalo.
Ngaphezu, Izitalato ezindala ziye zaba yindawo echumileyo yokuhlaziya inkcubeko yaseHungary. Ukongeza kwiivenkile kunye neevenkile, eyona nto inomtsalane kwi 7Isithili siyi-bar yokuchitha. Ukubhiyozela umtshato womhlobo wakho osenyongweni, okanye usuku lokuzalwa kwi-bar endala ye-quirky ngamava akhethekileyo kuphela kwindawo ebanda kakhulu yaseBudapest.
7. Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu: ILangstrasse Zurich
Iguqulelwe njengesona sitalato side, Indawo yaseLangstrasse eZurich yaphula yonke into oyaziyo malunga nelizwe eligcina ixesha. I-Langstrasse yinkwenkwe embi yaseZurich, isinqe, entsha, ngezibane ezikhanyayo ze-neon kwaye uhlala ekulungele ukuya epatini. ILangtrasse ineiindawo zokutya ezinkulu, imigoqo, kunye neeklabhu zokulala ebusuku, khetha nje ukhetho lwakho.
Ngaphezu, eyona ndawo ipholileyo yenye ezona ndawo zihamba phambili ze-LGBT eYurophu. Apha unokufumana i-groove yakho kwindawo ye-LGBT-enobubele ye-Les Garcons bar / indawo ye-pizza, umzekelo. Ukushwankathela, lo mmandla umangalisayo kunqabile ukuba ulale kwaye uya kukubonelela kwiindawo ezininzi zokutyela zobuhlanga, amaqela, nasemva kwamaqela kunjalo.
8. Amsterdam Emantla
Iindawo ezinkulu eziluhlaza, izakhiwo elihle, kunye nelali encinci enomtsalane, IAmsterdam-Noord inayo yonke. Ummandla opholileyo ungaphesheya koMlambo IJ, ke iiNoords zibonelela ngokumangalisayo Amabala epikiniki kunye neendawo zokudlala umculo. Ukongeza kuzo zonke ezi zikhubalo, IAmsterdam-Noord likhaya leyona swing iphezulu eYurophu, kubathandi beadrenaline.
kunjalo, ukuba ucwangcisa ngaphezulu iholide esebenzayo ke umlambo ugqibelele imisebenzi yangaphandle. Ukuhamba ngebhayisikile, ukubaleka, nkqu nokuhamba ngesikhephe, Umlambo IJ ugqibelele. Eyona nto iphambili kukuba iAmsterdam-Noord ngumhlaba omncinci waseDatshi ngaphakathi kwesixeko esithandekayo saseAmsterdam. Izinketho azipheli, kwaye umoya uyathandeka, Akumangalisi ukuba abahambahambayo babuyele kwenye yezona ndawo zipholileyo eYurophu.
9. Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu: IShoreditch eLondon
Uninzi lwabahambi bayazi Shoreditch Enkosi kwintengiso entle yeBrick Lane. kunjalo, IShoreditch yeyona ndawo ilungileyo yokuya kuthenga iziqwenga zee-boutique ezinkulu ezizimeleyo. Lo ngumzekelo omnye wamacala awodwa kwindawo ebhalwe ngegrafiti. I-Shoreditch isenokungafani nomfanekiso, kodwa ngokuqinisekileyo unomphefumlo ongowayo.
Ngokuchanekileyo kuba iShoreditch ayisiyiyo indawo yesiNgesi yesiqhelo, ibe likhaya labazobi balapha. Ukwengeza, le ndawo yasezidolophini yeyona ndawo ingcono yokuzama ukutya ezitalatweni kwindawo zentengiso okanye ezivelelayo, bamba ifilimu kwi-cinema ephahleni kwaye ujonge ubugcisa bodonga obufihliweyo kwikona. Ukushwankathela, Uhlobo olukhethekileyo lukaShoreditch luyenza eyona ndawo ipholileyo eLondon.
Kunxweme oluhle lwaseScotland olunemibono yolwandlekazi lweAtlantic, I-Findhorn ngumlingo. Ngelixa ibekwe eMorayshire, abanye bayibiza ngokuba yindawo yokuhlala, endaweni yobumelwane ngokweedolophu. I-Findhorn yindawo entle yeholide, ngakumbi indawo ekuyiwa kuyo elwandle. Apha, uyakufumana amathuba amahle okonwabisa iindawo zamanzi okanye ukuphumla elunxwemeni.
Ngaphezu, I-Findhorn inelali emangalisayo ye-eco, kunye nohambo lokuzonwabisa luhamba kakuhle kule mihla. Eli cala liluhlaza longeza imeko ethandekayo kwindawo ekhululekileyo, kunye nembonakalo yomhlaba kunye neatmosfera enkulu.
11. Iindawo zokuhlala ezipholileyo eYurophu: Vesterbro, Copenhagen
Nabani na ohlala eVesterbro uyakuthi le ndawo ipholileyo ineendawo ezimbalwa ezahlukileyo ezahlukileyo kuyo. Omnye usemncinci, ukukhohlisa, kwaye kanye isibane sezibane ezibomvu seCopenhagen kwaye enye inesichazi saseFrance malunga nayo. IVesterbro igcwele umahluko, ke nabani na otyelele iCopenhagen okokuqala uza kufumana into entle ayithandayo.
Ngamanye amazwi, IVesterbro yenye yezona ndawo zipholileyo eYurophu kuba inento emangazayo ukuyinika wonke umntu. Ukusuka kwizithuba eziluhlaza ukuya kwiindawo zokutyela ezifanelekileyo, Boutique chic, kunye nendlu yoluntu yaseAbsalon apho unokutya khona nabahlali, Uluntu lwaseVesterbro lwamkela kakhulu kwaye lulula. ngoko ke, Akumangalisi ukuba iVestrbro iphezulu 10 iindawo ezipholileyo eYurophu minyaka yonke.
12. IPorta Venezia, milan
Eyona ndawo intle kakhulu eMilan, UPorta Venezia ubamba iVeki yeFashoni yaseMilan kwaye uvale nge-bang phezulu 12 iindawo ezipholileyo eYurophu. Art, Ukutya kwaseNtaliyane, ngekona ukusuka kwiindawo zokuthenga ezilungileyo eMilan, kodwa iPorta Venezia ebuyiselweyo yi-Itali encinci, kude neziko lezokhenketho elinabantu abaninzi.
IPort Venezia inamagalari obugcisa aguquliweyo, cafes, nezitiya, njengeGiardini Publici emangalisayo. Isibhakabhaka esikhulu sasePorta Venezia sitsala abantu balapha, expats, nabahambi ukuba baxhomeke, xubeka, kunye nepati ngexesha leMilan Gay parade, kwaye yonke imihla kude kube lelo xesha. ke, ukuba ucwangcisa a impelaveki ibalekile eMilan, kungcono uyenze ibe yiveki ende, kungcono.
Thina Gcina A Isitimela Ndingakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya e 12 iindawo ezipholileyo eYurophu.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Indawo ezi-12 ezipholileyo eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fcoolest-neighborhoods-europe%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
cool coolestneighborhoodsEurope CoolNeighborhoods isinqe Neighborhoods Trendyneighborhoodseurope